War Deg-deg ah: Madaxweyne Xasan Sheekh oo goor dhow shir jaraa’id Qabanaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. War Deg-deg ah: Madaxweyne Xasan Sheekh oo goor dhow shir jaraa’id Qabanaayo * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
War Deg-deg ah: Madaxweyne Xasan Sheekh oo goor dhow shir jaraa’id Qabanaayo
By MAREEG on 14th November 2014
Mareeg.com-Wararka ka imanaya xarunta madaxtoyada Villa Somalia ayaa sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu goor dhow shir jaraa’id qabanayo iyadoo warfidiyeenadana ay ku sii socdaan xarunta madaxtoyada.
Shirkan jaraa’id oo ah kii ugu horeeyay ee uu madaxweynuhu isugu yeero saxaafada tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaafka u dhexeeysa isaga iyo ra’iisalwasaare Cabdiweli ayaa lagu wadaa in uu ugaga hadlo mowqifkiisa ku aadan khilaafka hareeyay siyaasada dalka Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa maalmihii la soo dhaafay ku adkeysanayay in uusan wax wadahadal ah ka gelaynin arrinta ra’iisalwasaaraha uuna doonayo in arrinta lagu kala baxo codbixinta baarlamaanka.
Lama oga in uu isbedel ku yimid mowqifka madaxweynaha iyadoo ay maalmihii la soo dhaafay ay sii xoogaysanayeen cadaadiska lagu hayo mas’uuliyiinta dowlada. Waxaana weli taagan is qabqabsiga xubnaha baarlamaanka iyadoo idaacadaha doodo ay u qabteen xildhibaanada ay muujinayaan in ay weli xildhibaanada kala taagan yihiin mowqifyo aad u kala fog. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa aaminsan in mooshinka laga keenay ra’iisal wasaaruhu uu yahay mid aan sharci ahayn halka xildhibaanada mooshinka geeyayna ay ku dhegen yihiin in uu yahay sharci.
Sidoo kale waxaa lagu wadaa in uu madaxweynuhu ka hadlo arrimaha shirka hiigsiga ee lagu wado dhowaan inuu ka dhaco magaalada Copenhagen.